Madaxweyne Alexander oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Soomaaliya(Sawirro)
Tuesday January 14, 2020 - 12:24:45 in Wararka by
Madaxweynaha Dalka Austria Alexander van Der ayaa warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka guddoomay Danjiraha cusub
ee dowlada Soomaaliya u magacowday dalkaas Ebyan Maxamed Saalax Ladane.
Safiirka Soomalaiya u magacaawdey dalka Austria danjire Ebyan Maxamed Saalax Ladane ayaa uga mahad celisey Madaxweynaha dalkaas soo dhoweynta loo sameeyey, iyadoo balan-qaaday iney xoojin doonto xiriirka saaxiibtnimo ee ka dhexeeya labada dal.
Madaxweynaha Austria Alexander van Der Bellen ayaa sheegay in dowladiisu ay diyaar u tahay inay la shaqeyso Safiirka cusub ee Soomaaliya, wuxuuna xusay in labada dal uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer oo muddo dheer soo jiray iyo iskaashi dhinacyo badan taabanaya.
Ebyan ayaa sidoo kale ah Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Switzerland iyo xarunta Labaad ee Qaramada Midoobey ee Magaalada Geneva.
"Waxaa sharaf ii ahayd inaan u gudbiyo warqadihii aqoonsiga ee Danjirenimo Mudane Alexander Van der Bellen, Madaxweynaha Dalka Austria, fadhigayguna yahay Geneva, Switzerland. Xafladda, waxaa igu weheliyey Mr. Salah Moallim Abubakar oo ah Xoghayaha Labaad ee Safaaraddeena, Geneva ee Waddanka Switzerland” ayey boggeeda facebook ku soo qortay danjire Abyan.